ရယ်စရာ Archives - Page5of5- MM Live News
စတုတ္ထတန်း​ကျောင်းသား ငြိမ်း​မောင်​ရဲ့ ရည်းစားစာဖတ်ရင်း ကျောတွေပါ ချမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး
16 Comments / ရယ်စရာ / By MM Live News
မိုးစက်( မလိခ )မှတင်ပြသည် June6, Malikha Media ဆရာမ သားကို ဖိုး​ထောင်​ဖင်​ချတယ်​ ​ဟေ ငြိမ်း​မောင်​ တိုင်​လိုက်​သည့်​စကား​ကြောင့်​ ဆရာမ ​ငေါက်​ခနဲ မတ်​တပ်​ထရပ်​လိုက်​သည်​။ သူတိုင်​လိုက်​သည်​ကို​တော့ အတန်းထဲမှ မည်​သူမှ မကြားလိုက်​ ဖိုး​ထောင်​ လာစမ်း ဆရာမ ​ခေါ်လိုက်​​တော့ တစ်​တန်းလုံးအသံတိတ်​ပြီး ဖိုး​ထောင်​အား စိတ်​ဝင်​တစားကြည့်​ကြသည်​။ ဖိုး​ထောင် ​ကား ကုတ်​​ချောင်း​ချောင်းနှင့်​ အတန်း​ရှေ့အ​ရောက်​၌ ငြိမ်း​မောင် ​က သားကိုအရင်​လုပ်​တာ ဆရာမ သူက ဘာလုပ်​တာလဲ သား ညီမ​လေး ကို ရည်းစား စာ​ပေးတယ်​ ​ဟေ ဟုတ်​လားငြိမ်း​မောင်​ စတုတ္ထတန်း​ကျောင်းသား ငြိမ်း​မောင်​တစ်​​ယောက်​ နည်းနည်းတွန့်​သွား၏ မှန်​၏ သူ​ရေးထား​သော ရည်းစား စာက ဖိုး​ထောင်​ညီမလက်​ ထဲသို့ ​ရောက်​​နေပြီဖြစ်​သည်​။ …
စတုတ္ထတန်း​ကျောင်းသား ငြိမ်း​မောင်​ရဲ့ ရည်းစားစာဖတ်ရင်း ကျောတွေပါ ချမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး Read More »
ကေတီဗီကအပြန် ဘောစိဦးလေးကြီး အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှော့ဖြစ်ကာ နန်းတော်ဆေးရုံးပို့လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်…
38 Comments / ရယ်စရာ / By MM Live
မန္တလေးမြို့ ရှိ BOF ကေတီဗီဆိုင်တွင် အသက် ၅၀နည်းပါးရှိ ဘောစိလူကြီးတစ်ယောက်သည်… အသက်၁၆ နှစ်သာရှိသေးသောကေတီဗီမယ်အား ချစ်ရေးပန်ကာ လက်ထက်ခွင့်တောင်းဆိုသည် ကောင်မလေးမှာအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုကာ… “”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက ခလေးရှိသေးတယ်””” ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မတွေမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း… နွားအို မြက်နုကြိုက်တာ အစဉ်လာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကာ ဒူးထောက်ကာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြန်… ကောင်မလေးကလည်း “ငရဲတွေကြီးပါ့မယ် ဦးရယ်…. မီးက တကယ် ခလေးရှိပါသေးတယ်”ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုလေသည်။ ဘောစိဦးလေးကြီးလည်း “မီးလေးရှေ့ရေးစဉ်းစားဟု”ပြောကာ အချို သတ်ပြီး… နောက်ဆုံးတော့ မီးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးလည်း ဘောစိဦးလေးကို မငြင်းသာ မလှုပ်သာပဲ လက်ထပ်ဖို့ ——သဘောတူ ခဲ့ရတယ်———။ —– ကောင်မလေးလည်း ဦးနဲ့ လက်ထပ်ပြီး ရွာကို ခဏဆိုပြီး ပြန်သွားတာပေါ့။ …
ကေတီဗီကအပြန် ဘောစိဦးလေးကြီး အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှော့ဖြစ်ကာ နန်းတော်ဆေးရုံးပို့လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်… Read More »
မကြွားတတ်ဘူး…လမ်းကြုံလို့ မုန့်ဖိုး ၂၅ သိန်း ပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ လူကြီး…
19 Comments / ရယ်စရာ / By MM Live
ကျုပ် သိပ်ကြည့်မရတဲ့ထဲမှာအကြွားသန်တဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ် …… ဘယ့်နှယ် …..စဉ်းစားကြည့် ..… ကျုပ်၁၀တန်းအောင်တုန်းက ဂုဏ်ထူး၅ဘာသာပါတယ်.. ခုချိန်ထိဘယ်သူ့မှ မပြောပြဖူးဘူး အာ့နဲ့ ဖေဖေက ၅ကျပ်သားဟမ်းချိန်းလေးလုပ်ပေးတယ် ကြွားတယ်ထင်မှာစိုးလို့ မဝတ်ဘူး .. ဟိုတလောက အပျင်းပြေ ရောက်ရင်နေဖို့ ပြင်ဦးလွင်မှာ အိမ်နဲ့ခြံဝယ်လိုက်တာ သိန်း ၆၀၀၀ ပေးရတယ် ဘယ်သူမှမသိဘူး .. ကျုပ် အိုင်ဖုန်း7ကိုဖုန်းပြောဖို့ Note7ကိုလိုင်းသုံးဖို့ဝယ်တုန်းကရော အွန်လိုင်းမှာ ရေးပီးကြွားဖူးလားပြော ???? ကြွားရမှာ ကျုပ်အရမ်းရှက်တာ …… အိမ်မှာ စီးပွားရေးတက်လို့ Lexus လေး တစ်စီးဝယ်တယ် ဘယ်တော့မှ လူရှေ့သူရှေ့ကားရှိတယ်လို့ ထုတ်မပြောဘူး မစီးဘူး မကြွားတတ်တာကိုက ငယ်ငယ်တည်းက အကျင့်လေ .. .. Shopping တစ်ခါထွက်ရင် …
မကြွားတတ်ဘူး…လမ်းကြုံလို့ မုန့်ဖိုး ၂၅ သိန်း ပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ လူကြီး… Read More »